Nexus agaghị enweta gam akporo P | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Nexus, Gam akporo nsụgharị
Versiondị mbụ nke gam akporo P adịlarị n'etiti anyị. Ọ hapụrụ anyị ọtụtụ akụkọ, nke anyị nakọtara N'isiokwu a. Enwere otutu atụmanya, n'ihi na izu ndị na-adịbeghị anya, anyị amatala banyere ụfọdụ ọrụ gam akporo P ga-etinye. A mara ọkwa ọkwa ọhụrụ nke nwere ike iwute ọtụtụ mmadụ.
N'ihi na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google agaghị eru Nexus. Ekwentị ga-aga n'ihu na-enweta mmelite nche rue ọnwa Nọvemba nke afọ a. Mana ọ dị nwute, ha agaghị enweta ụdị nke sistemụ arụmọrụ.
Maka ugbu a ọ bụ naanị Google Pixel nwere ohere ụdị edemede gara aga nke gam akporo P. Mana ọ dịka ọ ga-adịkwa otu ahụ. Yabụ ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ ga - abụ nke izizi dakọtara na Pixel. O doro anya na oge dị mkpa.
Ebe mkpebi a yikwara ka otu nzọụkwụ dị na atụmatụ Google ịhapụ Nexus. Ugbu a achọtaghị ha n'ọtụtụ ụlọ ahịa. Ha dị na weebụsaịtị ụfọdụ, mana na nnukwu ọnụ ahịa. Yabụ na ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ilekwasị anya na Pixels.
Ya mere, Ihe niile na-egosi na mmelite ahụ na gam akporo 8.1 Oreo ga-abụ nke ikpeazụ nke Nexus ga-enweta na nke a. Ebe ọ bụ na ha agaghị enwe ike ịnụ ụtọ gam akporo P. Ọ bụ ezie na ha ga-enwe mmelite nchedo dị mkpa ruo na njedebe nke afọ.
Ọ bụ mkpebi dị mkpa na ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ọ gaghị amasị ya. Ma, O yiri ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ụlọ ọrụ ahụ na-ahọrọ itinye mgbali ya na Pixels. Ekwentị ndị ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị nyocha mbụ a nke gam akporo P. Kedu ihe ị chere gbasara mkpebi a Google?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Android P agaghị abịa Nexus
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ ya na Madrid na March 17